WARARKA MAANTA | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 10
Muslimiinta Maraykanka oo loo Diray waraaqo hajabaad ah
Maraykanka:- Urur ay leeyihiin muslimiinta Maraykanku ayaa sheegay in warqad kooban oo isku mid ah loo diray saddex masaajid oo ku yaalla gobolka California, warqadaas oo hadalka ku qorani ku tilmaamay Muslimiinta dad wasakh ahoo maan gaaban, isla markaana ku wargelisay in ay shandadahooda ka xidhxidhaan Maraykanka. Warqaddan farriinta nacaybka ah ku xardhanayd ayaa sidoo kale waxay ammaantay madaxweynaha la ...
Faah Faahin: Maxaabiis isku Daldashay Xabsi ku yaala Magaalada Berbera
Berbera:- Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan maxaabiis ku xirnaa xabsi ku yaal magaalada Berbera. Warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in Ibraahim Waceys Aadan oo ka Mid ka mid ahaa maxaabiis ku xirneyd xabsiga Berbera uu isku dilay gudaha xabsiga, iyadoo maxbuus kale oo xaalad adag ku jira laga soo furay xarigii uu isku daldalayay. Saraakiisha ...
Burbur Soo garay Garoonka Jomo Kenyatta ee Magaalada Nairobi
Kenya:- Wararka ka Imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in Mas’uuliyiinta garoonka diyaaradaha Kenya ayaa xalay si ku meel gaar ah u xireen Maddaarka Caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ka dib markii diyaarad ka tagtay Soomaaliya ay shil burbur u geystay garoonka ay ku gashay halkaasi. War qoraal ah oo ka soo Madaxda garoonka Jomo Kenyatta ayaa lagu sheegay ...
DHAGEYSO:- Howlgallo Qorsheysan oo ka dhacay Gobolka Hiiraan
Baladweyne:- Howlgallo ay Ciidanka Nabadsugidda Soomaaliya ka sameyeen duleedka Magaalada Magaalada Baledweyne , waxa ay kusoo qabteen Walxaha Qarxa. Ciidanka Nabadsugidda Soomaaliya waxa ay Howgalka ka sameyeen degaanka Ceel –gaal oo dhaca duleedka Magaalada Magaalada Baledweyne, waxaa ciidanka usuura gashay inay gacanta ku soo dhigeen miinooyin Alshabaab ay ku uruursanayeen degaanka Ceel-gaal . Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay Saraakiisha Ciidamadda ...
AKHRISO:- Puntland oo ku Goodisay iney hakineyso Doorashooyinka ka socdo Magaalada Garowe
Garoowe:- War qoraal ah oo kasoo baxay Puntland ayaa looga hadlay doorashada aqalka hoose iyo inaan xubno kordhin aqalka hoose ah loo sameyn karin xildhibaanada ka imaanaya deegaanada Somaliland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Puntland aysan ku qanacsaneyn kuraasta aqalka sare ee deegaanada waqooyi ee la qeybiyay, waxaana la sheegay ineysan aqbali doonin in la hareer maraa hishiiskii madaxda madasha ...
Waa sidee Xaalada Bukaanadii ku dhawacmay qaraxii Shalay ka Dhacay Muqdisho??
MUQDISHO:- Dadkii ku dhawacmay qarixii shalay ka dhacay nawaaxiga suuqa-beerta degmada waabari ee magaalada muqdisho. Dhaawacyada Bukaanadii shalay ku dhawacmay qaraxa ayaa waxa ay jiifaan isbitaalada Daaru-shifaa iyo Isbitalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha Isbitalka Madiina Maxamed Yuusuf oo gudaha Isbitalka kula hadlay warfidiyeenada ayaa sheegay in lasoo garsiiyay dhawacyada 41 ruux, bukaanada qaarkood waxa ay ahaayeen kuwa iska fudud. ...
Katumba Wamala” Waxaan helnay Mushaarka 10 Bilood ee Ciidanka nooga jira AMISOM”
Uganda:- Taliyaha Ciidanka Difaaca Uganda Edward Katumba Wamala,ayaa sheegay in Ururka Midowga Yurub ay bixiyeen Mushaarka Ciidanka Uganda ee jooga Soomaaliya,kaas oo Ciidanka ka maqnaa 10 Bilood. Taliyaha Ciidanka Difaaca Uganda waxaa uu sheegay in Midowga Yurub ay $ 4.9Milyan oo dollar ku wareejisay Bangiga dhexe ee Dalka Uganda taas oo ay Dowladda siin doonto Ciidankeeda ka tirsan AMISOM. Dib ...
Faah Faahin:- Dagaallo ka dhacay Gobolka Shabeelaha Hoose
Laanta buuro:- Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan weeraro kala duwan oo ay kooxda Shabaab ka fuliyeen deegaanno hoostaga Gobolka Shabeelaha Hoose. Goob Joogayaal ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen in Gelinkii dambe ee shalay kooxda Shabaab ay weerareen deegaanka Laanta Buuro ee Gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana weerarkaasi la isku adeegsaday Hubka cul culus iyo kan fudud waxa uuna ...
Guddiga Xalinta Khlaafaadka” Musuq maasuq ayaan ka dhex Baaraynaa Doorashooyinka
MUQDISHO: Guddiga Madaxa Banaan ee Xallinta Khilaafaadka oo lahadlay warbaahinta waxa uu Shacabka Soomaaliyeed u sheegay in uu socdo baaritaan ay ku hubinayaan cabashooyin la xiriira in la musuqmaasuqay kuraas ka mid ah doorashooyinka ka socda dalka. GMXKHDD waxaa u ku wargalinayaa dhamaan inta ay khuseyso dacwadaha aan gacanta ku heyno, in Guddigu uusan weli dacwadahaas go’aan ka gaarin. Muddo ...
Kuuba oo bilowday baroordiiq Sagaal maalmood
Cuba: Dalka Cuba waxaa ka billaabatay sagaal maalmood oo loo baroordiiqayo hogaamiyihii kacdoonka dalkaasi oo shalay geeriyooday. Fidel Castro ayaa ahaa 90 sano jir. Dad badan oo reer Cuba ah ayaa u barooranaya geerida Fidel Castro, maadaama uu sanado badan ka hortagayay maamulka Washington inkastoo shirqoollo badan uu ka badbaaday. Marka meydkiisa la gubo ka dib, waxaa haraaga la soo ...
Page 10 of 312« First...«89101112	»	203040...Last »